Sebenzisa ummeleli ku-Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce nokufanayo | Kusuka kuLinux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-GNU / Linux, Amanethiwekhi / Amaseva, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Indlela engiyichaza ngezansi itholwe ngokuhumushela i-athikili kusiPanishi ku-Arch Wiki mayelana nokusebenzisa i- Ummeleli. Le ndlela kufanele isebenze ngokuphelele kunoma ikuphi okunye ukusatshalaliswa.
Izindawo zeDeskithophu njenge Xfce o I-LXDE iswele noma yiluphi uhlelo lokusebenza olubavumela ukuphatha ukuphatha i-Global Proxy kuhlelo, ngendlela esingakwenza ngayo I-Gnome o KDE.
Ezinye izinhlelo (njenge-wget) zisebenzisa okuguquguqukayo kwemvelo kwefomu "protocol_proxy" ukunquma ukumelwa kwephrothokholi ethile (ngokwesibonelo, i-HTTP, i-FTP, ...).
Nasi isibonelo sendlela yokulungisa lokhu okuguqukayo:
Uma sifuna ukwenza okuguqukayo okushiwo ngenhla kommeleli kutholakale kubo bonke abasebenzisi, singangeza iskripthi, isibonelo "Ummeleli.sh"ngaphakathi /etc/profile.d/. Isikripthi kufanele sisebenzise izimvume.
Ngenye indlela, ungenza ukushintsha kokuguquguqukayo ngokungeza umsebenzi kufayela lakho .bashrc Ngokulandelayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Sebenzisa ummeleli ku-Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce nokufanayo
iqiniso angikaze ngisebenzise ummeleli ukuthi uyini?
Well ... Ummeleli unokusetshenziswa okuningi. Ummeleli usebenza ukunqanda ukuxhumana kwenethiwekhi okwenziwa iklayenti kuseva yendawo okuyiwa kuyo. Kwenzekani, njengoba bengisho, kunokusetshenziswa okuningi. Ake sibone ukuthi ngikuchaza kanjani ngendlela elula:
a) Masithi ku-PC yenkampani yakho ubhekabheka uMmeleli. Uma inomsebenzi wokugcina okwesikhashana futhi ufaka kusuka, ngokwesibonelo, linux.net, lonke ulwazi olutholayo luzogcinwa kunqolobane yalo. Ngakho-ke lapho ungena ngemvume futhi ngesinye isikhathi, ukufinyelela kuzoshesha kancane ngoba uzoba nezinto ezithile kunqolobane eshiwo.
b) Ake sithi uxhuma kwi-PC enkampanini yakho futhi ufuna ukufinyelela ku-desdelinux.net. Uma uyobhekabheka leyo PC, yenza isicelo ku-Proxy Server yenkampani yakho futhi ngokuya ngemikhawulo onayo, le seva ithumela isicelo sakho kwi-Intanethi noma iyenqaba.
Lawa amacala amabili ajwayelekile. Iseva elibamba ingaba okuthile noma okuhle kakhulu, noma kubi kakhulu (njengakwami).
Ngeminye imininingwane bheka lesi sixhumanisi
Futhi kuyasebenza ukunqanda izihlungi, masingakhohlwa
Lolu olunye uhlobo lwommeleli 🙂
Bengifuna ukubuza umbhali ukuthi, ngabe wake wabelana ngoxhumano lwe-inthanethi nge-PAN (i-bluetooth)? Ngikwenze ngo-win 7 no-XP, lapho bengixhuma khona, ngiphakamise ummeleli (i-perProxy eyenziwe ngeJava) nakomunye umshini nge-PAN, ngilungiselele iFirefox ne-IP kanye nechweba. Lapho ngishintshela kuLinux, ngangingasazi ukuthi ngikwazi kanjani ukwenza i-PAN phakathi kwemishini.
Sawubona ntambama enhle,
Ngingumsebenzisi ojabulayo kaLubuntu futhi ngingene enkingeni yokuthi ngisebenzisa ukuxhumana kwami ​​kwasekolishi (nommeleli) nsuku zonke kanye nokuxhuma kwekhaya futhi (ngaphandle kommeleli). Ngakho-ke, uma ngilungiselela ummeleli wohlelo lonke, kufanele ngikubeke futhi ngikucishe kuye ngokuthi ngisekolishi noma cha.
Ingabe ikhona indlela yokwenza le nqubo isebenze ukuze kuthi ngokuya ngenethiwekhi ye-Wi-Fi oxhuma kuyo, isebenze noma cha?
Sawubona ntambama enhle 🙂
Kwenzeka kanjani ukuthi usethe ummeleli wohlelo lwakho? Ngumyalo muni?
Ngingahlela iskripthi esithola i-Wifi oxhunywe kuyo, futhi kuya ngokuthi yikuphi kulokhu ... sebenzisa ummeleli noma enye.
Sanibonani nonke! Bengisebenza ne-LXDE isikhashana futhi, ngodaba olufana noluka-Ariel, ngaphoqeleka ukuthi ngilungiselele ummeleli wokuxhuma kwi-Intanethi.
Bengifunda imibhalo ku-AskUbuntu futhi ngathola umuntu obuze into efanayo futhi impendulo ibisiza kakhulu! Ngishiya isixhumanisi uma kwenzeka othile ethanda ukusibuka: http://askubuntu.com/q/175172/260592
Futhi ekugcineni, ngifisa ukwazi ukuthi ngabe i-KZKG ^ Gaara yahlela iskripthi esithola i-Wifi futhi siguqule ummeleli ngokuya ngenethiwekhi ... Kungasiza kakhulu uma nginquma ukuwabelana ngakho.
Ngiyabonga kakhulu nemikhonzo!
Sawubona, ngisebenzisa i-slackware 14.1 futhi ngenze ingxenye yeskripthi kahle, engingakutholanga ohlelweni lwami kwakuyifayela le-.bashrc
Shenz Baphomet kusho
Lo mbhalo mdala kancane, kepha ngisazokubhalela kuwo ngoba kubonakala kuyinto eseduzane kakhulu enkingeni YAMI:
Yini okufanele ngiyenze lapho umsebenzisi wami enefomu le-USER @ COMPANY? Uma unaka; Ama-arrobas amabili azosala kulayini ofanayo!
Faka esikhundleni seGedit neMedit kuXfce